Negesi convectors nge igesi yemvelo: isimiso yokusebenza, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Kwimakethe ebanzi ezahlukene ngokwanele Ukushisa kumadivayisi ahlukahlukene. Phakathi kwabo ungathola igesi heater ku igesi yemvelo ngamagumbi enkulu namakamelo oversized. Umthengi has ithuba lokukhetha phakathi onobuhle lowo kuyodingeka izici ezithile lobuchwepheshe.
Isici omuhle - intengo
Uma unesithakazelo gas heater igesi yemvelo, kufanele uzijwayeze nomkhiqizi yasekuqaleni futhi izindleko onobuhle ezahlukene. Intengo zedivayisi ngokuvumelana nomthamo kanye Ukucaciswa. Phakathi kwezinye izinto, lokhu ipharamitha kuthinta iqophelo. Ngakho, igesi convector kungenziwa imikhiqizo Ukrainian uthenge emakethe ngoba $ 150. Naphezu kweqiniso lokuthi intengo ezingabizi, njengoba abasebenzisi uthi, imodeli alesi sigaba tisebenta kahle ngonyaka. Uma inkampani akuqinisekisi ukuthi ungathembela isebenze izinyanga 5. Kwezinye izimo, ukulungisa okwengeziwe kungase akunakunisiza. Uma ungafuni ngesikhathi esifushane ibe igesi convector entsha noma ilungisa, ungakhetha convector ekhiqizwa Turkey. Negesi heater ku igesi yemvelo, okuyinto izithombe okusesihlokweni esithi, okuye kwenziwa kuye kwabonisa ngokwabo phakathi abathengi, basebenza kuyo yonke inkathi kuze kube seqophelweni kuze kube yilapho usukulungele ukuba uzivale.
Uma ucabangela ngilungele ukuthengiswa igesi heater igesi yemvelo, ekuqaleni belulekwa ukuba abhekisele isimiso ukusebenza kwalo imishini. Ikamelo senziwa cast iron, kukhona igesi yemvelo amandla omlilo inqubo. Iyunithi has a ipayipi elihlangene ngoba entry kanye ophumayo. Ngu igesi convector elamukelayo umoya-mpilo, okuyilona elidingekayo ukuze ngoba amandla omlilo.
Uma heater igesi igesi yemvelo ucabangela njengesisekelo yesimanje bafudumale system, okokuqala udinga ukuba sicabangele izinzuzo nemibi alusebenzise. Mhlawumbe ezinye zazo abasakwazi ezivamile. Kufanele unqume ukuthi uhlelo wadala egcwele olusebenza futhi eqotho. Uma siqhathanisa heater igesi kanye boilers, lapho igesi fuel isetshenziswa, kungase kuqashelwe ukuthi le last wathi amayunithi eqala khona amapayipi amanzi radiators, okuyinto zinwetshwe endlini futhi efakwe egumbini ngalinye. Kepha convectors, kufanele afakwe egumbini ngalinye ngokwehlukana nelincane amapayipi kanye radiators afana, kodwa ubukhulu babo olukhudlwana. Uma convectors kunezinzuzo eziningi, uma kulinganiswa nokwenu radiators, ngabe isungulwe namuhla kuzo zonke ekhaya, futhi kusukela radiators Wenqabile isikhathi eside. Kodwa labo nabanye inombolo ethile ngobuhle nangobubi bawo.
Negesi heater ku igesi yemvelo, ngokuvumelana nabathengisi futhi abakhiqizi, inedizayini ezihlangene. Lesi sici kusengathiwa isihlobo, ubuka ukubukeka imishini. Idivayisi libukeka iziko miniature, ukuze ukwazi ukuyifaka ngeke ngezansi sill ngamunye. Uma sicabangela izindleko ongaphakeme, kungase kuqashelwe ukuthi ephakeme uma eqhathaniswa convectors value, ezisetshenziswa ezivamile bafudumale izinhlelo. Abakhiqizi washo enye inzuzo, okuyinto sivezwe kula ukusetshenziswa igesi kuncibilike ohlelweni, kodwa lokhu yikona ayikwazi kubhekwe nalutho convectors igesi, uphethiloli asebenzayo ungalungiselela iyiphi kubhayela, ukushintsha sikaphalafini kanye Imibhobho esemzimbeni.
Ngokuthenga le convector igesi nge igesi yemvelo, cishe ulindele okusezingeni eliphezulu kahle. Ukuphumelela kule imishini kuphezulu ngempela, kodwa uma iqhathaniswa ne kubhayela igesi, inzuzo okungabazekayo. Abanikazi izindlu zasemaphandleni futhi amakamelo abafuna ukufaka ekhaya igesi yakho convector, musa banethuba ukusebenzisa kubhayela igesi. Yingakho plus kungenziwa ngokuthi kakhulu okufanele.
Uma ucabangela elithola, ungakhetha futhi isikhathi ukuthi convector uhlelo kungekho manzi njengoba kokupholisayo. Leli qiniso esivumelana kakhulu ebusika, lapho kukhona ukwesaba ketshezi qa amaphayiphi, kuba inzuzo kakhulu abanikazi izindlu zasemaphandleni. Nokho, kufanele uzilungiselele lokuthi ushintsho okungazelelwe lokushisa kanye nomswakama ezingapheli zingayilimaza sekugcineni yendlu, njengoba amakhaza futhi manzi - bona konakalisa ifenisha kanye ekhaya impahla. Lokhu kubonisa ukuthi endlini unomphela yokuhlala convector akuyona indawo. avame yakhe isetshenziselwe izakhiwo okungezona zokuhlala ngohlobo workshop, emadlangaleni kanye emagalaji. Negesi convector igesi yemvelo, kwalezi ziqinisekiso abakhiqizi unesinye inzuzo, okuyinto lubonakaliswa ngemvelo. Imishini akabi umoya-mpilo. Abathengi bavame ukuchitha ukuqhathanisa amadivayisi nge boilers, ephinde ezihlukahlukayo + ngokomusa plus.
Kufanele ukhumbule ukuthi izinga lokushisa kwe-convector kumele ungabi degrees engaphezu kwengu-60. Ukwahluleka okuthobela nanoma mibandela ngeke othulini esikhuthaza ukwanda nokusimama ziyolibaleka. Uma convector yakho uyakwazi ukugcina izimo ezinjalo, kuyodingeka idluliselwe izakhiwo okungezona zokuhlala.
I yokuntula main
Negesi heater ku igesi yemvelo, okuyinto libuyekeza ungafunda esihlokweni ethulwa endaweni yokudayisa e okunezinhlobonhlobo esikhulu. Nokho, ngaphambi kokuthenga kumele ukhumbule ukuthi lezi amadivaysi babe yokuntula kwabo. Ngokwesibonelo, ukuze usethe lolu phiko kuzodingeka hammer ngaleso udonga. Futhi ukwenza omunye umgodi kule akwanele, kumele kube efanelekayo ukufakwa Ukubonakalisa coaxial. I element zokugcina zalesi simiso kuyinto tube-e-tube lapho zidlula qeda amagesi. Mayelana umoya ohlanzekile, esidingeka amandla omlilo, lingena le convector ngokuvumelana tube yangaphandle. Uma ukucabanga indlu, igumbi ngalinye kunesikhungo esiyinkimbinkimbi emafasiteleni ezimbalwa, ngemva kokumiswa convectors isakhiwo izovela uhlobo isakhiwo, embozwe izimbobo. Ukuze ugweme lesi simo, ochwepheshe ukweluleka ukusebenzisa convector olulodwa, okuyinto efakwe esodongeni olungaphandle, kodwa imishini bukwazi kufanele lube sezingeni elingenza idivayisi wakwazi ukuxoxa nazo zonke izakhiwo.
Domestic igesi heater ku igesi yemvelo unenye ethile, okungukufa inertia eliphansi imishini. Ngamanye amazwi, idivayisi ngokushesha ukufuthelana, futhi ngezinga elifanayo epholisa. Lokhu isimo zingabizwa ngokuthi njengoba plus noma lokususa. Uma kuziwa egumbini lokuphumula, leli qiniso alivumi, ithinta ophambene lokushisa ukhululekile. Uma imishini efakwe egalaji noma idokodo, Ukushisa okusheshayo kungenziwa ngokuthi plus eziqondile. Negesi heater ngu igesi yemvelo, isimiso eliye ezichazwe ngenhla, kufanele ethile ngokwengeziwe, okungase ngokuthi isici zedivayisi. Idivayisi has a egumbini amandla omlilo lapho igesi heats ekamelweni kanye umzimba, ngemva kwalokho heats emoyeni.
Ukuze operation okuqhubekayo kule apharathasi we convector amelana steel lantambama kumele kusetshenziswe. Kulezi zici zedivayisi kuyoba ezibizayo. Nokho, uma idivayisi isebenzisa mncane steel convector ehluleka ngemva kuvuthe futhi ukugqwala imiphumela.
Indlela yokusebenzisa Umshini wokuwasha izitsha kahle?
Jacks: ukukhanda, izici, uwoyela ushintsho
Explosion-ubufakazi izinjini: izinhlobo nezincazelo
Kungani udinga plinth nge ikhebula isiteshi
Inhloko ezishisayo Ukushisa radiators: izinhlobo, izimiso yokusebenza, ukufakwa
Banana ngesikhathi sokukhulelwa: inzuzo kanye nokulimala
Master class ku Ukugwala iinthombe "Ikhathuni ikati"
Amagama angeniso ngesiNgisi. Izici nokungafani kwezinye izingxenye zenkulumo
Ukubuyekezwa kwe "AE86 Toyota" imoto
Kuphi ukuqala amalungiselelo lomshado? Imininingwane ebalulekile kanye namathiphu
Kanjani ukuba azale amakati
Irekhodi lomhlaba - ibhentshini press. Amageyimu okwenza amandla
Ukwaphuka we unyawo: ukwelashwa, ukucinga indikimba yendaba, izimpawu kanye nezimpawu. Izimpawu unyawo ukwa
Dimitrion Central Hotel 3 * (Greece / Crete) izithombe, izilinganiso nokubuyekezwa
Generator Izinkuni ngamalahle: idivayisi iphinde Umgomo we operation
Indlela Yokusinda Ngenkinga?
"Naltrexone": ukubuyekezwa. Yokusetshenziswa, incazelo, analogs